Freespire 6.0 dia miaraka amin'ny Linux Kernel 5.3.0-28, Mate 1.20 ary bebe kokoa | Avy amin'ny Linux
Andro vitsivitsy lasa izay nanome ny mpamorona pc-opensystems nambara tamin'ny alàlan'ny fandefasana tao amin'ny tranonkala ofisialin'ny Freespire, ny famoahana ny kinova vaovao an'ny Freespire 6.0 izay tonga efa ho efa-bolana taorian'ny nanombohany. Ity kinova vaovao ity dia manasongadina ny fanavaozana ny sasany amin'ireo singa an'ny rafitra, toy ny Linux Kernel izay tonga ao amin'ny kinova 5.3.0-28, ny birao Mate ao amin'ny kinova 1.20 sy singa maro hafa.
Ho an'ireo izay tsy zatra ny Freespire dia tokony ho fantatrao izany ity dia rafitra miasa 64 OPEN miorina amin'ny OPEN, misy maimaimpoana ary mifantoka amin'ireo mpampiasa loharano misokatra sy mpamorona izay maniry rafitra fisokafana malalaka malalaka.
Izy io dia manana ny rindranasa rehetra izay ilain'ny mpampiasa amin'ny fanjifana haino aman-jery sy fitaovana fampandrosoana ho an'ireo izay te hilalao miaraka amin'ilay rafitra ary hampihatra ny rindrambaiko sy ny voany manokana.
Una ny toetra mampiavaka nataon'i Freespire es izany dia fizarana tsy misy mpamily mimari-droa na codecs multimedia tafiditra ao, Ankoatr'izay mifantoka amin'ny fanomezana fampiharana maimaim-poana.
Freespire dia fihodinan'ny Linspire maimaim-poana, izay fantatra fa manana tantara nitranga. Tany am-piandohan'ny taona 2018 dia niverina avy nilentika i Linspire andiany 7.0 nandritra ny folo taona, tamin'ny fotoana namotsorana ny Freespire version 3.0, avy eo ny Freespire 4.0 dia ny volana Aogositra 2018, Linspire 8.0 tamin'ny Janoary 2019 ary Freespire 5.0 tamin'ny Oktobra 2019 .
1 Inona no vaovao ao amin'ny Freespire 6.0?
2 marary mitsika
Inona no vaovao ao amin'ny Freespire 6.0?
Ity kinova vaovao an'ny Freespire 6.0 dia mitohy amin'ny alàlan'ny Ubuntu 18.04 LTS (izay mbola manohy mandray fanavaozam-baovao ary hotohanana hatramin'ny 2023), na dia manana ny endrik'ilay orinasa aza (izay notahirizina), mba hanomezana endrika mahafinaritra izay miavaka amin'ireo fizarana hafa.
Amin'ny famoahana ity kinova vaovao ity dia mizara ny mpamorona:
Ankafizin'ireo mpampiasa anay ny birao maro samihafa - ho an'ity famotsorana ity dia havoakanay aloha ny birao MATE, ho avy ny KDE, araho hatrany. Miaraka amin'ny Windows 7 amin'ny faran'ny androm-piainany mahasoa, maro ny olona manana PC izay mety tsy dia tsara loatra ho an'ny Windows 10; Fotoana mety izao hifindra monina any amin'ny iray amin'ireo fizarana Linux be mpahalala indrindra, izay amboarina ho an'ity karazana PC ity ihany.
Araka izany, ao amin'ny doka fotsiny dia mitatitra izany izy ireo ny kinova vaovao dia ahitana ireto fanovana manaraka ireto:
Ity kinova ity amin'ny ankapobeny manome fanohanana ny seho HiDPI miaraka amina detection sy scaling mavitrika, ho fanampin'izay rafitra mifanentana aminy avy amin'ity kinova ity miaraka amin'ny DRI3 sy XPresent, koa ny fanatsarana lehibe natao tamin'ny lohahevitra momba ny tontolo iainana ary koa ny asa hanatsarana ny fifandanjan'ny fitaovan'ny tontolo iainana miaraka amin'ny GTK3 +.
Miaraka amin'ny fanavaozana ity kinova Linux Kernel ity mihatsara ny fizarana mifanentana amin'ireo fitaovana finday isan-karazany, satria ny fanampiana rehetra tohanan'ny Linux Kernel 5.3.0-28 dia mahasoa amin'ny fizarana.
Ohatra iray ny fanohanana ny AMD Radeon RX5700 Series vaovao, fanohanana ny Turing TU116, fanatsarana ny fanohanana ny RISC-V ary koa ny fanohanan'ny rafitra famatrarana vaovao sy ny rafitra fisie. Ohatra, UBIFS, NFS, VirtIO-PMEM, Ceph, Btrfs ary XFS, F2FS miaraka amin'ny fanohanan'ny teratany SWAP, famatrarana LZ4 ho an'ny EROFS, fiasa vaovao ao amin'ny EXT4, sns.
Amin'ireo fanovana hafa misongadina, amin'ity kinova vaovao ity dia ny fampidirana ireo fonosana vaovao:
Tsy misy bebe kokoa, ho an'ireo liana afaka mametraka na mitsapa ity fizarana ity an'ny Linux na amin'ny solosain'izy ireo na amin'ny milina virtoaly, tokony ho fantatr'izy ireo izany Ny freespire dia mitaky fikirakirana x86_64 bit, RAM 4GB, ary kapila mafy 20GB farafaharatsiny mihazakazaka tontolo iainana famokarana fototra.
Ho an'ny fampisehoana tsara indrindra, farafaharatsiny farafahakeliny 6 ka hatramin'ny 8 GB RAM no atolotra ho an'ireo mpampiasa izay te-hitantana rindrambaiko fakan-tahaka na rindrambaiko CAD.
Azonao atao ny mahazo ny sarin'ny rafitra avy amin'ny rohy etsy ambany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » Freespire 6.0 Tonga amin'ny Linux Kernel 5.3.0-28, Mate 1.20 ary bebe kokoa
tsy nomena anarana dia hoy izy:
vady 1.20? fa raha mandeha 1.24 ny vady dia natomboka 1.20 taona lasa izay ny vady 2.
Toy izany koa no nieritreretako azy, satria na ny Kernel 5.4 aza dia navotsotra tamin'ny faran'ny taona lasa (miresaka momba ny kinova izay hanana fanohanana lava) ary tsy lazaina intsony ny Linux 5.5.
Tsy mahagaga ahy ny marina satria tsy dia fahita ny fizarana (ankoatry ny Rolling Release) izay misy ireo singa farany farany.
Ny hany zavatra azoko eritreretina dia ny niasan'izy ireo tamin'ny fototra hatramin'ny taona lasa ary izany no nahatonga azy ireo niaraka tamin'ireo kinova ireo.
Ary inona no olana, mijaly amin'ny versionitis ve ianao, na ny tena marina, mandeha tsara io.